Glossary of Existentialism | ကိုသင်ကာ . . . . Ko Thinker
← Math-Toon –2(Statistics)
List of Western Philosophers →
January 16, 2010 · 5:39 pm
Glossary of Existentialism
Filed under Philosophy, Reference
Tagged as Existentialism, Philosophy, Reference
7 responses to “Glossary of Existentialism”
အခုလို စနစ်တကျ ဖော်ပြပေးပါ ကျေးဇူးအထူး ကိုသင်ကာ။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စကားလုံးတွေရဲ့ မြန်မာ ဘာသာပြန်ကို သန်သလို (ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်) ပြန်နေကြရတာများတော့ “ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ မြန်မာစကာလုံး” တွေကို တန်ဖိုးထား သိချင်လှတယ်။ ပြဋ္ဌာန်းပြီးသား မဟုတ်သော်လည်း ထင်ရာစိုင်းနေရတာနဲ့ စာရင် ရှေ့က ဆရာသမားတွေ (ဆန်းလွင်၊ မောင်သာမည) သုံးခဲ့တဲ့ ခြေရာခွက်ကို လိုက်နင်းနိုင်ရင်လည်း မဆိုးဘူး ပြောရမယ်ထင်တယ်။ Anguish ကို “ပရိဒေ၀” လို့ သုံးလိုက်ရတဲ့ အရသာက တော်တော်ကောင်းတာကိုး..။း) Technical Terms တွေရဲ့ မြန်မာပြန်စကားလုံးတွေ နောက်ထပ်လည်း မျှော်နေပါ့မယ်။
ဒါနဲ့ ဆရာ “မောင်သာမည” ဟာ ဆရာကြီး “မြသန်းတင့်” ရဲ့ ကလောင်ခွဲတစ်ခုလို့ ကြားမိသလားလို့…။ မသေချာလို့ မေးကြည့်တာပါ…။
ဆရာမောင်သာမညက သတ်သတ်ပါ။ အခုထိ သက်ရှိထင်ရှား ရှိပါတယ်။ အတွေးအမြင်စာစောင်မှာလည်း အရင်က သူ အမြဲရေးပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်က သူနဲ့ ဆုံကြပါသေးတယ်။
သြော် ဒီလိုကိုး……း)
စာကျသွားတာလေးတွေ ပို့စ်မှာ ရှိတယ်။ သည်းခံကြပါကုန်။
သေသေချာချာ ဖတ်ပြီးတာ နဲ့ ..အကုန်လုံးကူးသွားတယ်
Dear Ko MM Thinker,
Thanks for the interesting post. I like Saya Maung Thar Manya’s writings very much. I have been desperately trying to contact him about one of his books. All I could find out was that he is no longer living in Burma. In one of your messages, you said you met him recently. I would be most grateful if you could help me contact him.